Iindaba - RFID ulwazi olusisiseko
1. Yintoni i-RFID?
I-RFID sisishunqulelo se-Radio Frequency Identification, oko kukuthi, ukuchongwa kwamaza kanomathotholo. Idla ngokubizwa ngokuba yi-electronic inductive chip okanye ikhadi elisondele, ikhadi elikufutshane, ikhadi elingaqhagamshelwanga, ileyibhile ye-elektroniki, ikhowudi ye-elektroniki, njl.
Inkqubo epheleleyo ye-RFID inamacandelo amabini: i-Reader kunye ne-Transponder. Umgaqo wokusebenza kukuba i-Reader ihambisa i-frequency ethile yamandla erediyo engapheliyo kwi-Transponder ukuqhuba i-Transponder circuit ukuthumela i-ID Code yangaphakathi. Ngeli xesha, uMfundi ufumana i-ID. Ikhowudi. I-Transponder ikhethekileyo ngenxa yokuba ayisebenzisi iibhetri, abafowunelwa, kunye namakhadi okuswayipha ngoko angoyiki ukungcola, kwaye i-password ye-chip yiyona kuphela emhlabeni engenako ukukhutshelwa, ngokhuseleko oluphezulu kunye nobomi obude.
I-RFID inoluhlu olubanzi lwezicelo. Usetyenziso oluqhelekileyo okwangoku lubandakanya iitshiphusi zezilwanyana, izixhobo ze-car chip ezichasene nobusela, ulawulo lokufikelela, ulawulo lwendawo yokupaka, umatshini wokuvelisa, kunye nolawulo lwezinto. Kukho iindidi ezimbini zeethegi ze-RFID: iithegi ezisebenzayo kunye ne-passive tags.
Oku kulandelayo lulwakhiwo lwangaphakathi lwethegi ye-elektroniki: umzobo weskimu wokwakheka kwetshiphu + i-eriyali kunye nenkqubo yeRFID
2. Yintoni ileyibhile ye-elektroniki
Iithegi ze-elektroniki zibizwa ngokuba ziithegi zamaza erediyo kunye nokuchongwa kwamaza erediyo kwi-RFID. Bubuchwephesha bokuchonga obuzenzekelayo obusebenzisa iisiginali zerediyo ukuchonga izinto ekujoliswe kuzo kunye nokufumana iinkcukacha ezinxulumeneyo. Umsebenzi wokuchonga awufuni ungenelelo lomntu. Njengoguqulelo olungenacingo lwebarcodes, iteknoloji yeRFID inobuchwephesha obungangeni manzi, i-antimagnetic, ubushushu obuphezulu, kunye nobomi benkonzo ende, umgama omde wokufunda, idatha ekwileyibhile inokubethelwa, umthamo wedatha yokugcina mkhulu, ulwazi lokugcina lunokutshintshwa ngokukhululekileyo kunye nezinye iingenelo. .
3. Yintoni iteknoloji yeRFID?
Ukuchongwa kwefrikhwensi kanomathotholo yeRFID yitekhnoloji yokuchonga ezenzekelayo, ethi iqonde ngokuzenzekelayo into ekujoliswe kuyo kwaye ifumane idatha enxulumeneyo ngemiqondiso yerediyo. Umsebenzi wokuchonga awufuni ungenelelo lwezandla kwaye unokusebenza kwiindawo ezahlukeneyo ezinzima. Itekhnoloji yeRFID inokuchonga izinto ezihamba ngesantya esiphezulu kwaye inokuchonga iithegi ezininzi ngaxeshanye, kwaye umsebenzi ukhawuleza kwaye ulungile.
Iimveliso zerediyo zomgama omfutshane azoyiki iimeko ezingqongileyo ezirhabaxa njengamabala e-oyile kunye nongcoliseko lothuli. Banokutshintsha iibarcodes kwiindawo ezinjalo, umzekelo, ukulandelela izinto kumgca wendibano yefektri. Iimveliso zefrikhwensi yerediyo yomgama omde zisetyenziswa kakhulu kwitrafikhi, kwaye umgama wokuchonga unokufikelela kumashumi eemitha, njengokuqokelelwa komrhumo ozenzekelayo okanye ukuchongwa kwesithuthi.
4. Ngawaphi amacandelo asisiseko enkqubo ye-RFID?
Eyona nkqubo isisiseko yeRFID inamacandelo amathathu:
Ithegi: Yenziwe ngamacandelo okudibanisa kunye neetships. Ithegi nganye inekhowudi ye-elektroniki ekhethekileyo kwaye iqhotyoshelwe kwinto ukuchonga into ekujoliswe kuyo. Umfundi: Isixhobo esifunda (kwaye ngamanye amaxesha ukubhala) ulwazi ithegi. Yenzelwe ukuba iphathwe ngesandla okanye ilungiswe;
I-eriyali: Hambisa iisiginali zamaza erediyo phakathi kwethegi kunye nomfundi.